အလန်းလွန်လွန်းလို့ ကြည့်ရှုသူ အဆမတန်များနေတဲ့ K-pop သီချင်း | Buzzy
အလန်းလွန်လွန်းလို့ ကြည့်ရှုသူ အဆမတန်များနေတဲ့ K-pop သီချင်း
ချစ်ဖို့ကောင်းချက် ၊ မကြည့်မိရင် နောင်တရလ်ိမ့်မယ်
K-Pop အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twice ရဲ. "TT" အမည်ရှိ ဂီတဗီဒီယိုဟာ လက်တလောမှာ ကြည့်ရှုသူအထူးများပြားပြီး ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဒီခွေရဲ. နာမည်ကလည်း TT လို့ပဲ ပေးထားပြီး ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၉ သန်းကျော်သြွးပါပြီ။
K-Pop အမြိုးသမီးအဖှဲ့တဈခုဖွဈတဲ့ Twice ရဲ. "TT" အမညျရှိ ဂီတဗီဒီယိုဟာ လကျတလောမှာ ကွညျ့ရှုသူအထူးမြားပွားပွီး ရပေနျးစားနပေါတယျ။ ဒီခှရေဲ. နာမညျကလညျး TT လို့ပဲ ပေးထားပွီး ကွညျ့ရှုသူပေါငျး ၁၉ သနျးကြျောသွှးပါပွီ။
ဒါပေမယ့်လည်း ထုံးစံအတိုင်း မကောင်းပြောသူတွေ ညစ်ညမ်းတယ်လို့ ဆိုသူတွေလည်း အများအပြား ရှိသလို Twice အဖွဲ့က ကာကွယ်ပြောပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း မနည်းမနောပါပဲ ။ ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ ချစ်စရာ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေတဲ့ Music Video တစ်ခုပါပဲ။
ဒါပမေယျ့လညျး ထုံးစံအတိုငျး မကောငျးပွောသူတှေ ညဈညမျးတယျလို့ ဆိုသူတှလေညျး အမြားအပွား ရှိသလို Twice အဖှဲ့က ကာကှယျပွောပေးတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး မနညျးမနောပါပဲ ။ ခွုံပွီးပွောရရငျတော့ ခဈြစရာ တငျဆကျမှုတှနေဲ့ ကွညျ့ရတာ အဆငျပွတေဲ့ Music Video တဈခုပါပဲ။